5 Apr 2018 . 4:16 PM
အညိုရောင် မျက်အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရဲ့ အလှက ရေပြင်ကို ကြည့်နေရသလို ကိုယ့်ရဲ့ မျက်လုံးနဲ့ စိတ်ကို အာရုံလွှဲလို့မရနိုင်လောက်အောင် လှနေမယ်လို့ ဘယ်သူက ထင်ထားမှာလဲ? ရေပြင်နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းတာထက်ကို ပိုပြီးလှနေတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့လိုက်ရပြီ။ ကြည့်လေ မဝလေ၊ ကြည့်လေ ပိုပြီး မြတ်နိုးလာလေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အညိုရောင်မျက်အိမ်ရဲ့ အလှဟာ မျက်စံအမည်းရောင်လေး ကျဉ်းသွားလေ ပိုပြီး လှလာလေပါပဲ။
စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ အညိုရောင်မျက်အိမ်ပိုင်ရှင်တွေက အမည်းရောင်မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ပိုင်ထားတဲ့သူတွေထက် ပိုပြီး ထက်မြက်တယ်။ အရာရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်မြင်အောင် ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ကိစ္စအားလုံးကို အသေးစိတ်လေ့လာတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေဆိုရင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာမျိုး၊ ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေ လုပ်လေ့မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာဆိုရင်တော့ အဲဒီအရာတစ်ခုကို အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလေ့ရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အစရှိသဖြင့် မှတ်ချက်ချထားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကြည်လင်ပြီးပြတ်သားတဲ့ အညိုရောင်မျက်အိမ်နဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံဟာ ချောကလက်ရဲ့ ချိုမြန်မှုနဲ့လည်း တူပြန်ရော။ ဘယ်အချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ချောကလတ်ကို စားချင်စိတ်မကုန်သလိုမျိုးပဲ။ အချိန်နဲ့ ရာသီဥတုမရွေး ဒီမျက်အိမ်လေးကိုပဲ ကြည့်ချင်နေမိတယ်။ ကိုယ့်ကိုပြန်ငေးကြည့်နေတဲ့ အဲဒီမျက်ဝန်းတစ်စုံကလည်း ကိုယ့်ကို လောကဓံတွေရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့ခံစားရစေစတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ ထင်မထားတဲ့အလှတရားတွေဆိုတာ လက်တွေ့တည်ရှိနေသေးပါတယ်လို့ပြောနေသံတွေကို အဲဒီမျက်အိမ်တွေထဲကနေ ကြားနေရတယ်။
အညိုရောက်မျက်အိမ်တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားရမှုဟာ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဒီလှပတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ကြည့်နေရတဲ့ ကျွန်မအဖို့ကလည်း မျက်အိမ်တစ်စုံရဲ့ အလှက ဒီလောက် မှင်သက်နေရအောင် လှနိုင်လွန်းခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးခဲ့ပါဘူး။
မည်းမှောင်တဲ့သူတွေက မျက်ကပ်မှန်အတုတွေတပ်ပြီး အတုယောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ လှပတဲ့အညိုရောင်မျက်ဝန်းတစ်စုံပိုင်ရှင်တွေက အသာအယာနဲ့ ခေါင်းမော့ပြီး အားလုံးကို သိမ်ငယ်အောင် ပြုလုပ်နေနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူက မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း Eyeshadow တွေ ခြယ်တဲ့အခါမှာ သူများတွေလို မျက်ကပ်မှန်တပ်ပြီး အထူးတလေ လှနေအောင်လုပ်စရာမလိုဘူးလေ။ ယောကျာ်းလေးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း သာမန် မျက်အိမ်အမည်းရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုပြီး ချောနေတတ်ပြီး ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုသိမ်ငယ်အောင်လုပ်နေလည်း မည်းမှောင်တဲ့မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်တွေကလည်း အားမငယ်ပါနဲ့နော်။ သဘာဝအလှသည်သာ အလှဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အညိုရောငျ မကျြအိမျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မကျြဝနျးတဈစုံရဲ့ အလှက ရပွေငျကို ကွညျ့နရေသလို ကိုယျ့ရဲ့ မကျြလုံးနဲ့ စိတျကို အာရုံလှဲလို့မရနိုငျလောကျအောငျ လှနမေယျလို့ ဘယျသူက ထငျထားမှာလဲ? ရပွေငျနဲ့ ခိုငျးနှိုငျးတာထကျကို ပိုပွီးလှနတောကို ကိုယျတိုငျမွငျတှခေဲ့လိုကျရပွီ။ ကွညျ့လေ မဝလေ၊ ကွညျ့လေ ပိုပွီး မွတျနိုးလာလေ ဖွဈလာပါတယျ။ အညိုရောငျမကျြအိမျရဲ့ အလှဟာ မကျြစံအမညျးရောငျလေး ကဉျြးသှားလေ ပိုပွီး လှလာလပေါပဲ။
စိတျပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာသုံးသပျခကျြအရ အညိုရောငျမကျြအိမျပိုငျရှငျတှကေ အမညျးရောငျမကျြဝနျးတဈစုံကို ပိုငျထားတဲ့သူတှထေကျ ပိုပွီး ထကျမွကျတယျ။ အရာရာမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အောငျမွငျအောငျ ကိုယျ့ဒူးကိုယျခြှနျနိုငျတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။ ကိစ်စအားလုံးကို အသေးစိတျလလေ့ာတတျတဲ့သူဖွဈတယျ။ ကိုယျမကြှမျးကငျြတဲ့အရာတှဆေိုရငျ ဝငျရောကျစှကျဖကျတာမြိုး၊ ဆှေးနှေးတာမြိုးတှေ လုပျလမေ့ရှိတဲ့သူတှဖွေဈတယျ။ ကိုယျကြှမျးကငျြတဲ့အရာဆိုရငျတော့ အဲဒီအရာတဈခုကို အထူးခြှနျဆုံးဖွဈအောငျ ကွိုးစားလရှေိ့ကွသူတှဖွေဈပါတယျဆိုပွီး အစရှိသဖွငျ့ မှတျခကျြခထြားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
ကွညျလငျပွီးပွတျသားတဲ့ အညိုရောငျမကျြအိမျနဲ့ မကျြဝနျးတဈစုံဟာ ခြောကလကျရဲ့ ခြိုမွနျမှုနဲ့လညျး တူပွနျရော။ ဘယျအခြိနျကွညျ့လိုကျကွညျ့လိုကျ ခြောကလတျကို စားခငျြစိတျမကုနျသလိုမြိုးပဲ။ အခြိနျနဲ့ ရာသီဥတုမရှေး ဒီမကျြအိမျလေးကိုပဲ ကွညျ့ခငျြနမေိတယျ။ ကိုယျ့ကိုပွနျငေးကွညျ့နတေဲ့ အဲဒီမကျြဝနျးတဈစုံကလညျး ကိုယျ့ကို လောကဓံတှရေဲ့ ရနျကနေ ကာကှယျပေးနတေယျလို့ခံစားရစစေတယျ။ ဒီကမ်ဘာမှာ ထငျမထားတဲ့အလှတရားတှဆေိုတာ လကျတှတေ့ညျရှိနသေေးပါတယျလို့ပွောနသေံတှကေို အဲဒီမကျြအိမျတှထေဲကနေ ကွားနရေတယျ။
အညိုရောကျမကျြအိမျတဈစုံကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတဈယောကျအတှကျ သူ့ရဲ့ ပိုငျဆိုငျထားရမှုဟာ ဂုဏျယူစရာတဈခုဖွဈနခေဲ့ပွီး ဒီလှပတဲ့မကျြဝနျးတဈစုံကို ကွညျ့နရေတဲ့ ကြှနျမအဖို့ကလညျး မကျြအိမျတဈစုံရဲ့ အလှက ဒီလောကျ မှငျသကျနရေအောငျ လှနိုငျလှနျးခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ အမှနျတရားကို ရှာဖှလေိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ ဂုဏျယူလို့မဆုံးခဲ့ပါဘူး။
မညျးမှောငျတဲ့သူတှကေ မကျြကပျမှနျအတုတှတေပျပွီး အတုယောငျဆောငျနတေဲ့အခြိနျမှာ လှပတဲ့အညိုရောငျမကျြဝနျးတဈစုံပိုငျရှငျတှကေ အသာအယာနဲ့ ခေါငျးမော့ပွီး အားလုံးကို သိမျငယျအောငျ ပွုလုပျနနေိုငျသူတှဖွေဈပါတယျ။ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူက မိနျးကလေးဖွဈခဲ့ရငျလညျး Eyeshadow တှေ ခွယျတဲ့အခါမှာ သူမြားတှလေို မကျြကပျမှနျတပျပွီး အထူးတလေ လှနအေောငျလုပျစရာမလိုဘူးလေ။ ယောကျြားလေးဖွဈခဲ့ရငျလညျး သာမနျ မကျြအိမျအမညျးရှိတဲ့ သူတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ပိုပွီး ခြောနတေတျပွီး ပိုဆှဲဆောငျမှုရှိနပေါတယျ။ ဒီလိုသိမျငယျအောငျလုပျနလေညျး မညျးမှောငျတဲ့မကျြဝနျးပိုငျရှငျတှကေလညျး အားမငယျပါနဲ့နျော။ သဘာဝအလှသညျသာ အလှဆုံးဖွဈပါတယျ။